Taariikhda Dawlada Sucuudiga iyo qaabkii loo Aas-aasay wax ka baro Qormadii 3` aad | Togdheer News Network
Taariikhda Dawlada Sucuudiga iyo qaabkii loo Aas-aasay wax ka baro Qormadii 3` aad
IMAAM MAXAMED BIN SUCUUD IYO MUDADDII UU XILKA HAYEY
Waxa uu xilka hayey muddadii u dhaxaysay 1139 illaa 1179 higriyada oo ku beegnayd 1727 illaa 1765 taariikhda miilaadiga dhimashadii aabihii Sucuun bin Maxamed Ibnu Maqran ka dib sida aynu hore u soo xusnay waxa xilka la wareegay wiilkiisa Maxamed Sucuud Bin Maxamed Ibnu Maqran oo isagu ahaa ka ugu weynaa wiilasha Sucuud waxaanu noqday Amiirka Darciya.
Sidoo kale Maxamed waxa uu ahaa Xaakim Caadil ah oo khayrka jecel xilligaas uu xilka qabtayna waxa ay ahayd xilligii uu heshiisku dhexmaray Darciya iyo Sheekh Maxamed Cadiwahaab . Waxaanu ahaa heshiiska labada dhinac dhexmaray mid taariikhi, bilawna waxa uu noqday in isbadal ku yimaado deegaanka Najid dadkuna ay mustaqbal wanaagsan u diyaar garoobaan. Sidoo kale Sheekh Maxamed Cabdiwahaabna waxa uu bilaabay in uu Dacwada, Khayrka iyo Islaaxa ugu yeedho Madaxda, Qaadiyaasha iyo Culimada kuwaas oo ahaa kuwii u hiiliyey Sheekh mudaddii uu dhibanaa ee uu hijrada ku jiray. Waxa kale oo uu Amray Asxaabtiisa iyo dadkii taabacsanaaba inay u diyaar garoobaan Jihaad iyo faafinta dacwada Rabbi iyo wanaaga dadka dhexdiisaba.
Haddaba Amiir Maxamed waxa uu Jihaadka u diyaarsaday ciidamo dagaalyahana ah iyo qalab koodiiba, sida fardo iyo wax lamid ah oo la fuulo laguna dagaal gelikaro kuwaas oo kor u qaaday Calan ka Jihaadna iclaamiey. Laakiin may ahayn muhiimada dacwada Rabbi uu Amiirku ku taageeraayey mid sahlan , waxa ay ku qaadatay 21 sannadood innuu la Jihaatamo Qabaa`il iyo Umaro cadaw ku ahaa dacwada Rabbi.
Dagaaladii ay qaaday dawlada Sucuudigu bilawgii hore waxa uu ahaa dagaalkii Riyaad. Dagaalkaasina waxa uu ka bilaabmay markii Nin la odhan jiray Duhaad Ibinu Dawaas iyo koox uu watay ay weerar ku soo qaadeen deegaano iyo tuulooyin maamulka Imaam Maxamed hoos iman jiray sannadkii 1159 hijriyada. Sidoo kale waxa sannadkaas ka bilaabmay Jaziirada carabta dagaalo diineed iyo kuwo siyaasadeedba .
Dagaaladani waxa ay u dhexeeyeen Imaam Maxamed iyo Duhaam oo ahaa Ninkii haystay Riyaad waxaanay socdeen dagaaladu 20 sannadoo. Intii ay socdeen dagaaladu waxa uu marba soo abaabuli jiray Duhaam Fitno wadayaal, Basaasiin hadan Imaam Maxamed waxa uu kolba lagalaayey heshiis hadana waa uu ka baxaayey oo wuu khiyaamaynaaayey oo hadana dagaal ayuu iclaaminaayey .
Imaam Maxamed waxa uu geeriyooday isagoo aannu dhammaanin dagaalkii uu kula jiray ninkii ka talinaayey Riyaad arrinkaasna waxa uu uga tagay Imaam Cabdicasiis Ibnu Maxamed bin Sucuud oo ahaa wiilkiisii kaas oo qabsaday Riyaad guulna ka gaadhay sannadkii 1187hijriyada kana eryey Duhaam dagaalo qadhaadh oo soconaayey 8sannadood ka dib taas oo ku khasabtay ugu danbaytiina Duhaam halkaas innuu ka cararo.
Sidoo kale mudaddii lagu guda jiray dagaaladii u dhaxeeyey Amiirka Darciya iyo Ninkii haystay Riyaad waxa ay ahayd dawladii koobaad ee Sucuudigu mid isasii balaadhisa oo gaadhaysay guulo deg deg ah dacwadana ku fidinaysay tuulooyin iyo dhul badan oo ay qabsatayba waxaana ka mid ahaa dhulkaas Cayayiin, Xar-mila, Wasaaq, Sadiir iyo Washam.
Hadaba isna waxa jiray Nin Cadawga labaad ku ahaa dawlada Sucuudiga Ninkaasna magaciisana waxa la odhanjiray Carii-car Ibnu Dajiin oo isagu ahaa Odayga iyo hogaamiyaha Qabaa`ilka Banii Khaalid iyo Amiirka Axsaa kaas oo dacwada iyo heshiisiinta dadka ka qaaday Cadawtinimo. Waxa kale oo uu Ninkaasi aad uga xanaaqsanaa una adkaysan waayey isbalaadhinta dawlada Sucuudiga iyo guulihii ay gaadhaysay iyo dadka cusub ee kolba ku soo biiraaya. Waxaanu Ninkaasi soo urrur saday kooxo aad ubadan oo hubaysan , waxaanu la soo galay ciidamadii buuraha ku yaalla duleedka Darciya.
Laakiin Darciya waxa joogay rag Amiirkooda daacad u ahaa oo Mukhlisiin ahaa kuwaas oo u babac dhigay Ibnu Carii-car iyo kooxihiisii. Ugu danbayntiina dagaalo googoos ahaa oo daba dheeraaday ka dib waxa uu u arkay Ibnu Carii-car in aanay faaido u lahayn rajada in la joojiyo dacwada iyo heshiisiinta dadka waxaanu iskaga laabtay deegaankiisii Axsaa ee uu ka yimi isagoo Muqafal ka ah faafinta dacwada Rabbi iyo heshiisiinta dadka.
Qormooyinkii aynu soo dhaafnay waxa aynu ka soo dheehanay oo ay ina tusayaan in Amiir Maxamed bin Sucuud uu ahaa ninkii ugu horeeyey ee reer Aalla Sucuud ah ee ku bushaareeya Jihaadka dacwada iyo in kor looqaado Xaqa iyo Taawxiidka Rabbi waxa uu dagaalo ku qaaday kuwii u gargaaraayey Shirkiga iyo Baadilka 21 sannadood ayuu u sabraayey dhibaatooyinka ka soo gaadhaayey dagaaladii uu kula jiray cadawga. Ilaahayna waa ugu gargaaray Islaam nimada waxaana soo ifbaxay dacwada Toowxiidka Rabbi . Cidhib dan beedkiisina waxa uu noqday mid sii muuqda, waxa kale oo aanay I laaweynin dadka ku nool Sucuudigu hiilkii uu u hiiliyey Islaamka iyo qaadistii uu qaaday Calanka Towxiidka illaa maantadan dalka Sucuudiga la joogo waa mid arrinka Amiirkan iyo taariikhdiisaba ay is weyn u qadariyaan .
Dhimashadii Imaam Maxamed Bin Sucuud
Waxa uu geeriyooday Imaam Maxamed Bin Sucaad bishii Rabiil Awal sannadkii 1179hijriyada oo ku beenayd 1765 miilaadiga, waxaanu geeriyooday dawlada sucuudiga oo isku duuban dacwada iyo Islaaxuna uu ku fidaayo dhamaan gobolada Najid. Waxa kale oo ay xukuumadii cusubayd ee ka danbaysay ay timi gobolada oo dhan oo uu yahay Distoorka lagu maamulaa Kitaabka Alle iyo Sunaha Nabiga (NNKH) ee Dahiran iyo in lagu dadaalo dhaqankii ay lahaayeen Salafu Saalax.
*Raali galin khristayaasha waxa aan ka raaligalinayaa Mowduuca oo iga dheeraaday maanta awgii Lasoco qaybta 4aad maalinta Isniinta ah ee fooda inagu soo haysa Insha Allah tacaalaa. Qalinkii:Maxamed Muuse Cilmi Bariise_77@hotmail.com/www.facebook/maxamedbariise Tel: 0634149171